ရက်ချိန်းမရှိ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
စိုးလေး မှ July 10, 2012 11:09pm တွင် တင်သွင်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
ခန္ဓာရတွက်၊ သေဖို့ရက်၊ ချိ်န်းချက်မရှိကြ၊
သေခါနီးမှာ၊ နိမိတ်လာ၊ ရောက်ရာဘုံဘ၀၊
ငရဲစရှိ၊ ဒုဂ္ဂတိ၊ မြင်သိထိုကာလ၊
ရင်တွင်းလှိုက်ပူ၊ ပွက်ပွက်ဆူ၊ ကယ်သူဝေးမည်ပ၊
ဘယ်သားဘယ်သမီး၊ ဘယ်ပစ္စည်း၊ ချည်းနှီးထိုကာလ၊
မသာနှလုံး၊ သေလွန်ဆုံး၊ အရှုံးနာကြည်းစွ၊
ချိန်မနှောင်းခင်၊ ယခုပင်၊ မြန်လျင်အားထုတ်ကြ(၀ိပဿနာ)၊
မဂ္ဂင်မှသာ၊ အားကိုးရာ၊ ခိုင်မာဖြောင့်တန်းလှ၊
အကုသလာ၊ ကြွေးတွေဟာ၊ များစွာအနန္တ၊
မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ ကဗျာ။ Views: 81
ဘလော့အမျိုးအစား(ဆုံးမစာ) Like မျှဝေရန်..မိတ်ဆွေထံသို့ Twitter
နှင်းဖြူ သည် July 20, 2012 က 3:31pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီး၏ ဆုံးမသြ၀ါဒ ကဗျာကို တင်ပေးတဲ့အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ဝိ သု ကြုံ (အသေမဦးခင်) သည် July 13, 2012 က 11:01amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ သာဓု........သာဓု......သာဓု မတင်တင်မိုး သည် July 11, 2012 က 12:51pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ မဂ်ဥာဏ်ဆိုက်ရောက်၊ ကြွေးကုန်ပျောက်၊
ကဲမောက်လွန်းချမ်းမြ၊ အသိ သတိ ပေးဆုံးမစာလေးပါ တင်ပြပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ ဂျူလိုင်မိုး သည် July 11, 2012 က 9:34amတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ မှတ်သားသွားပါတယ်ရှင်.. mmt သည် July 10, 2012 က 11:30pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ ဖတ်မှတ်သွားပါသည်။ ဇော်ထက်မောင် သည် July 10, 2012 က 11:10pmတွင် မှတ်ချက်ရေးသားသွားပါသည်။ အင်မတန်ကောင်းလှတဲ့ ဆုံးမစာလေးကို နာယူမှတ်သားသွားပါကြောင်းဗျား. ကျန်းမာပါစေခင်ဗျ။ RSS
Top News · Everything ဦးအောင်ကိုး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ'"ကျေးဇူးတင်ပါတယ်"22 minutes agoဦးအောင်ကိုး commented on လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ'"လူ့ လောကထဲမှာ တော့ ဘာကာမဂုဏ်ချမ်းသာမှ ချမ်းသာအစစ်မဟုတ်တကယ်ချမ်းသာမရှိလို့ မှတ်ယူနိုင်ပါသည်."31 minutes agoမူကြိုဆရာ posted blog posts“… ရဟန်းကို ဘာကြောင့် ရိုသေလေးစားရှိခိုးထိုက်သလဲ …”အနာထပိဏ် နဲ့ ၀ိသာခါ…ကဆုန် ညောင်ရေသွန်းပွဲတော်3 more…1 hour agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ3 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒုဗ္ဗလ ၀ိပဿနာဆိုတာ ဘာလဲ'3 hours agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ3 hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ကာမဂုဏ်ချမ်းသာတကာတွေထဲမှာ ဘယ်ကာမဂုဏ်ဟာ အချမ်းသာဆုံးလဲ'3 hours agoSoe Gyi shared လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post on Facebookဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလာ3း hours agoSoe Gyi liked လှိုင်ကျော်ထွေး's blog post 'ဒါန သီလ သမထ ကုသိုလ်တို့က ကိလေသာတို့ကို မပယ်နိုင်ဘူးလား'3 hours agoSoe Gyi shared မူကြိုဆရာ's blog post on Facebookမေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်3း hours agoSoe Gyi liked မူကြိုဆရာ's blog post 'မေတ္တာလေ.ကျင်.ခန်း'3 hours agoThaung Tan liked whitecolor's blog post 'တကယ့် ဥပေက္ခာဆိုတာ'3 hours ago More... RSS